यस्तो हुने थाहा पाएको भए पहिले नै किन परिन्थ्यो र मायामा ? किन गाँसिन्थ्यो र पिरती सानीसित गाउँसमाजको दुश्मन बनीबनी ? आज त्यही मायाले उसलाई घर न घाटको बनाएको छ । यसरी दुनियाँसामु जोगीजस्तो, पागलजस्तो भएर बाँच्नुपर्छ भन्ने सपनामा पनि सोचिएको थिएन । बालककालमा अति मीठो कल्पना थियो प्रेमको, अहिले युवावस्थामा तीतो टर्राे यथार्थ भोगिँदै छ । बसाइँ सर्दै ०५६ सालमा गैंडाकोट पुगेको हो उसको… विस्तृत समाचार
प्लस टु र स्नातक तहको कक्षा जय मल्टिपल कलेजबाट उत्तीर्ण गरेकी हुँ । ऐच्छिक विषय अंग्रेजी र सामाजिक कार्य हो । अर्काे वर्ष आरआर कलेजमा अंग्रेजी विषय लिएर स्नातकोत्तर गर्ने सोचमा छु । सामाजिक कार्यसँगै विशुद्ध राजनीतिमा पनि संलग्न छु । स्नातक अध्ययन क्रममा केही वर्ष अध्यापन पनि गराएँ । तर, मेरो कार्यक्षेत्र भनेको सामाजिक कार्य नै हो । स्नातक तह (पहिलो र तेस्रो वर्ष)… विस्तृत समाचार
म सूर्यबहादुर तामाङ । बुवाआमा दुवै परलोक भइसक्नुभएको, औँला भाँचेर गन्दा सही समय बताउन सक्दिनँ । एक्लो सन्तान । ०१६ सालमा जन्मिएँ । ०५० सालमा बिहे भो । दुई सन्तानमध्ये जेठी छोरी र ज्वाइँ अमेरिकी पिआरधारी । दुई बालबच्चासहित उतै छन् । पराइ घर गएकी कान्छी छोरी मूलपानी बस्छिन् । कान्छीका पनि दुई छोराछोरी । दुवै जनाको नागरिकता बनाइदिएपछि बुवा भनेर कहिल्यै भेट्न आएनन् ।… विस्तृत समाचार
आज विवश भई भन्न गइरहेको छु, यो कथा । मन थिएन तर बाध्य भएँ । ऊसँग भेट भएको एक वर्ष बितिसकेको थियो । देवले पशुपति कलेजमा चिनापर्ची गराएपछि हामी नजिकका साथी मात्र भएनौँ रुममेट नै बन्यौँ । उनीहरु स्नातक दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत थिए । तर, पत्रकारिताको एउटै कलेज भएकाले कोठानजिकैको पशुपति त्यागेर भृकुटीमण्डपको आरआर कलेजमा पुगें । त्यतिबेला फुर्सदिलो भएकाले प्रायः शनिबार सबै साथीभाइ मिलेर… विस्तृत समाचार
वर्षाैंदेखि उनीहरू एकअर्काबीच मनपेट साटेर दूरमा बसेका छन् । खुशी कोइराला, पोखरा । मौसम राई, काठमाडौं । दुवैको प्रेम बेजोडको छ । अपत्यारिलो छ । झट्ट हेर्दा जोडीमा कुनै कम्प्लेन देखिँदैन । प्रेमी आदिवासी जातको । प्रेमीका आर्य जातकी । दुवैको प्रेमलाई नियाल्दा उपन्यासको पात्रझैँ लाग्छ । हुन त वैंसमा श्याल पनि घोर्ले हुन्छ रे ! सबैको एकचोटि बैंस फुल्दोरहेछ । बैंसले जातभात केही नचिन्दोरहेछ… विस्तृत समाचार
कथाहरु घरघरमै छन्, समाज त माथिको कुरा भयो । एउटा सैनिक पृष्ठभूमिको घर, जहाँ बुहारी प्रताडित छिन्, ज्वाइँ पालिएका छन् । नेपाली सेनाको सेनानी (मेजर) बाट अवकास पाएका ध्रुवराज थापा काठमाडौं, बालाजु, नेपालटारका बासिन्दा हुन् । हिजोआज कल्याणकारी कोषद्वारा लगनखेलमा सञ्चालित पेट्रोल पम्पमा लेखापालको हैसियतसहित करारमा कार्यरत छन् । यिनका छोरा हुन्, पराग थापा । प्लस टु गरेका । लागुऔषधको अम्मली भएपछि पढाई चौपट ।… विस्तृत समाचार
‘तँ आजदेखि मेरा लागि मरिस् । मेरो मन मुटुबाट तँलाई आजदेखि मिल्काइदिएँ । आमा ! भनेर आइन्दा फर्केर नआइज ।’ श्रीमती अस्मितालाई नानाथरी बचन लगाउँदै सासूआमाले मतिर आँखा तर्दै भन्नुभयो, ‘यसलाई ल्याएदेखि एकजोर लुगा लगाइदिएको छस् ! थुइक्क !!’ घटना अस्ति शनिबारको हो । त्यसदिन कोठाका डेरावाला सबै लुगा धुन व्यस्त थिए । शनिबार कार्यालय छुट्टी भएकाले मैले पनि अस्मिता र मेरो लुगा धोइरहेको थिएँ… विस्तृत समाचार
सात वर्षअघि एसएलसी दिन हिँडेकी केटी सामुहिक बलात्कारमा परिन् । तिनलाई त्यहाँबाट पाटन अस्पतालमा ल्याइएको रहेछ । १२ चैत ०६८ मा महिला आयोगबाट फोन आयो, ‘एसएलसी दिन गएकी बलात्कृत छात्रालाई पाटन अस्पतालमा भर्ना गरेर राखिएको छ । उद्धार गरेर सहयोग गरिदिनुपर्ने भयो ।’ जो केटा देख्यो उसैलाई यही हो बलात्कारी भन्ने, लुगा च्यात्ने, फाल्ने र बबाल मच्चाउने अवस्थाकी । साथीहरूले पूर्णरूपमा पागल भएको मान्छेलाई ल्याउन… विस्तृत समाचार